प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले माफी माग्छन् कि राजीनामा दिन्छन् ? – Medianp
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले माफी माग्छन् कि राजीनामा दिन्छन् ?
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ ०१, २०७५१०:३१0
काठमाडौं, १ जेठ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जनकपुरमा गरेको नागरिक अभिनन्दनमा प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रील लालबाबु राउतले दिएको अभिव्यक्तिपछि मुलुकको राजनीति नै तरंग भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसको विरोध गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त संसदमै कमीकमजोरी भएको जानकारी गराइसकेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमबारको संसद् बैठकमा राउतको अभिव्यक्ति भत्र्सनायोग्य भएको बताए । केन्द्र सरकारले औपचारिक रूपमै धारणा सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री राउत अप्ठेरोमा परेका छन् । अब उनीसामु आफूले बोलेको विषयमा माफी माग्ने वा पदबाट राजीनामा दिने विकल्प बाँकी छ ।
राउतको पार्टी संघीय समाजवादी फोरमले भने उनको बचाउ गरेको छ । यतिखेर फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राउतको बचाउ गर्दै भारतीय सेनालाई नेपालमा प्रवेश गर्न दिएर सरकारले नेपाली सेनाको अपमान गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् । यसले अबको मुलुकको राजनीति अझै केही समय आरोप–प्रत्यारोपमै बित्ने देखिन्छ ।
चौतर्फी रूपमा केन्द्र सरकारमाथि मुख्यमन्त्री राउतलाई हटाउन दबाब परेको छ । तर, केन्द्र सरकारले चाहेर मात्रै राउतलाई हटाउन मिल्दैन । किनभने प्रदेश नम्बर २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको सरकार छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन मात्र गरेका छन् । त्यसैले राजपाले सहयोग फिर्ता लिएमा मात्र राउतको पद जान्छ ।
राजपाभित्र राउतलाई मुख्यमन्त्री बनाएको चित्त बुझेको छैन । सुरुदेखि नै राजपाका नेताहरूले एक वर्षपछि समीकरण परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पनि नयाँ हुने बताउँदैछ । अहिले राजनीतिक परिदृश्य सोही दिशामा अघि बढेको छ ।
बार्सिलोना छोडेर पिएसजी गएका नेयमार भन्छन्, ‘म थाकिसकेँ’
मोडल तथा चर्चित फिटनेस ट्रेनर रोवेनाको यो हट तस्विरहरु हेर्नुहोस्
भारतीय रियालिटी शोमा नेपाली ढाका टोपी लगाएर स्टेज चडेका नेपाली बाबु पृतम आचार्यले तहल्का मचाए
यसरी बनाउनुहोस् बिहेको रातलाई एक अविष्मरणीय क्षण !